Mukati Pfungwa Dzemunhu Anonzwisisa Zvakanyanya - Pfungwa
Mukati Pfungwa Dzemunhu Anonzwisisa Zvakanyanya
Iwe wave uchishanda pane iwo mharidzo kune wako webasa vhiki rese, uye iwe wakanyatsodurura moyo wako nemweya mukati maro. Paanoitumira kwauri nemazano mashoma, iwe unofanirwa kurwisa chishuwo chekunyungudika zvachose. Unonzwa misodzi ichierera. Wako waunoshanda naye anotarisa uko uye anoedza kukunyaradza achiti 'Hazvina basa. Anosarudza, uye anozviitira munhu wese. ” Asi hazvikunyaradze. Muchokwadi, iwe unotanga kushamisika kuti basa rako rinogona kunge rapera here.
zvekugara muwanano isina mufaro
Unoshamisika kuti chii chakaipa newe. Sei uchinzwa kurwadziwa uko vamwe vanoita kunge vasina kumbonzwa? Sei uchinzwa manzwiro ayo asingamboitwe nevazhinji? Sei uchichema misodzi yakawanda mugore rimwe kupfuura zvinoita munhu wepakati muhupenyu?
Sei pasina munhu anokuwana iwe? Unoshuvira kuti vanhu vakakukomberedza vanzwisise kukanganisa kwavanoita munzira yaunofunga, kunzwa, uye kuita. Asi havamboiti. Ivo vanokuparadzanisa iwe sekunge uri mwana asina hunhu, uye iwe haufunge kuti ndizvo zvakanaka .
Iwe uri munhu ane hanya zvakanyanya.
Nyika Hainzwisise Iwe
Vanhu vanokuudza kuti unonyanyisa, asi iwe unongo gadzirisa zvinhu padanho rakadzika. Uri nzwisisa , uye iwe unofarira kuchera zvakadzika pasi kuti uwane zvinhu kunze. Iwe unogara mukati memusoro wako wega. Nekuda kweizvi, iwe unonzwa zvinhu padanho rakasiyana zvachose pane vezera rako risinganyanye kuona. Uye iwo manzwiro akadzika anoita kuti iwe uwedzere kushushikana mupfungwa. Asi iwe hausi pamusoro pekuita, iwe unongo ita zvimwe mune mamwe mamiriro nekuti unonzwa zvakanyanya. Zvine musoro kuti waizoita zvakasiyana. Iwe unonzwa zvakanyanya kunzwira tsitsi uye kunetsekana nematambudziko iwe kana vanhu vaunofarira vane zvavari kusangana nazvo. Icho chinhu chakanaka, handiti?
Saka sei munhu wese asingakunzwisise? Sei vachitaura zvinhu seizvi: Usatora zvese zvese pachako 'Kana' Sei uchigara uchikurumidza? ' Vanhu vanowanzo tarisa kunzwisisika kwako sechinhu chakaipa uye vanokutsvinyira icho, izvo zvinoita kuti iwe uve nehanya, uye kutenderera kunoenderera.
Hypersensitivity Kune Kuongorora uye Kuongorora
Chokwadi, mhinduro yakaipa ndiyo yako yakaipa kwazvo kurota. Ichi ndicho chikonzero iwe uchiwanzo kubuda munzira yako kudzivirira kunetswa, kunyangwe kana zvichireva kushanda husiku hwese uye nekuzvipira hupenyu hwako wega kuti ufadze vamwe. Iwe unonamira pane zvakadzama nekuti unonzwisisa zvakanyanya. Iwe dzimwe nguva unoshuva kuti dai usina kuitazve basa kakawanda kudaro mukuyedza kuti zvinhu zvinyatsonaka. Unoshuva kuti dai waigona chete tora mhinduro pane kukosha kwechiso , asi pachinzvimbo, zvinokutumira iwe munguva yakareba ye kuzvipokana uye kushoropodza .
Iwe unonzwa sekunge iwe uri kugara uri pasi pemaikorosikopu uye munhu wese ari kukutongera pane zvese zvaunoita. Unoshamisika kuti sei munhu wese achigara akakutarisa. Iwe unokatyamadzwa nekuongororwa kwevamwe pamusoro pako, uye zvinonetsa kutarisa pane chero chimwe chinhu. Zvinotogoneka kuti iwe uve munguva chete uye unakirwe nehupenyu.
Mazuva ese Zvinogumbura
Tutsotso tudiki hadzisi tudiki kwauri. Munhu iyeye akagara akatarisana newe achirova tsoka yavo asingazungunuke anoita kuti ude kukambaira mugomba. Vamwe havaoni sei nyonganiso inounzwa neruzha rusina basa, mwenje unodzima, uye tsika dzakaipa dzevamwe? Sei zvisinganetse munhu wese kuti iyo yekuisa mhepo inorira painotendeuka uye kudzima? Hazvifambise here chero ani zvake mabhonkers ayo shefu anosunga tai ine chivara pairi?
Dzimwe nguva zvinokupengesa iwe kuti unozvifananidza sei kune izvo zvinyorwa. Iwe unovenga kuti unoziva maitiro evose kubva kushamwari yako yepamoyo kuenda kubarista kuchitoro chekofi cheko. Iwe unoziva mbatya dzavakapfeka svondo rapfuura uye vanogona kutaura kuti vakarara zvakadii pavakawana husiku hwapfuura nekusiyana kwemaziso avo. Unogona kuona comma isipo mamaira kure.
nzira yekuuya neinonakidza chokwadi nezvako
Iwe unoona kuti dzimwe nguva pfungwa dzako nezviito hazviite zvine musoro pfungwa - zvirinani sekutsanangurwa neiyo 'tsananguro inogamuchirwa,' asi iwe unonzwa kutongerwa kufunga nekuita pazviri zvakadaro. Iwe hauzive imwe nzira yekugadzirisa mamiriro ezvinhu muhupenyu hwako. Zvinoita kunge zvisingaite kuchinja kunyangwe pamazuva iwe aunoda kurarama 'zvakajairika' hupenyu. Sarudzo dzako dzakaganhurirwa. Iwe unonzwa usingakwanise kuita zviitiko zvezuva nezuva, uye iwe inzwa kubatwa uye vasingabatsiri. Iwe unonzwa kubatwa mukutenderera kwakashata zvekuti hauna simba rekumira. Uhwu ndihwo hupenyu hwako uye Gehena rako rezuva nezuva.
17 Kupona Matipi Kune Empaths Uye Vakanyanya Vanonzwisisa Vanhu
Zvinhu gumi nevaviri Zvakanyanya Vanonzwisisa Vanhu Cherekedza, Izvo Vamwe Vazhinji Vasingadaro
Izvo zvisingabatsiri Zvakanakira Kuva Munhu Akanyanya Anonzwisisa Munhu
Iwe unonzwa wakaparadzaniswa uye wakaparadzaniswa nevanhu vakakukomberedza, kusanganisira vezera rako nemhuri. Haukwanisi nekuti, sezvatakatosimbisa, hapana anokunzwisisa zvechokwadi . Kusiya imba kunounza iko kunzwa kwekutarisa kudiki uye kutonga kwakatsanangurwa pamusoro. Iwe unonetseka nezvezvaunotaura, maitiro ako uye kunyangwe mafambiro aunoita. Saka pane kugadzirisa kushushikana, iwe sarudza kugara pamba wega. Uri kusurukirwa .
Unozvibata Iwe Muhupenyu
Iwe une zvinangwa uye zviroto zvakare, kungofanana nechero ani zvake. Unoda hupenyu hukuru uye hwakanaka. Asi iwe unoziva kuti haazombozadzike nekuti unozvidzora kubva pakuedza. Iwe unoziva kuti hupenyu hune zvakawanda zvekupa, asi iwe unodzivisa nyika zvakanyanya sezvaunogona. Iyo kutya kukundikana uye kusatenderwa kwakawanda kwakasimba zvekuti hautenderi kuti utore hupenyu. Nguva inobaya uye iwe unonzwa sekunge hupenyu huri kupfuura newe. Une chokwadi chekuti iwe uchasiya ino nyika uine kuzvidemba uye kuzvidemba nekuda kwekusararama zvinoenderana nekwaniso yako yechokwadi.
Asi Iwe Hausi Wese akaipa, Handiti?
Pane zvinhu zvakawanda zvaunoshuvira kuti iwe ungachinje nezvako, asi hauna kushata mese, handiti? Mushure mezvose, iwe unoziva kuve wakanyanya kunetseka hakusi chakaipa nguva dzose. Iwe une zvakawanda zvakanaka hunhu uye zvikuru zvinhu zvekugovana. Une hanya nevamwe nenzira inoitwa nevanhu vashoma. Wako kutarisa kune zvakadzama inoona kuti ese 't' ayambuka. Iwe uri akaronga zvine hungwaru. Iwe unonyanya kufungidzira uye kugadzira. Izvi zvinhu zvakanaka, handiti?
Vanhu vakakupomera mhosva yekudaidzira uye pfungwa nzara . Ivo vakati haufungidzike uye hauna kugadzikana. Asi hapana chimwe chezvinhu izvi ndechechokwadi. Muchokwadi, zvakapesana chaizvo. Iwe unofungidzirwa kwazvo. Uri ane tsitsi zvakanyanya uye kunzwisisa. Iwe chete dzimwe nguva kurwisa kubata yako yepamusoro senzwi pamwero.
Iwe unongoshuvira kuti dai vanhu vaigona verenga pfungwa dzako kwenguva pfupi kuitira kuti vaone kuti sei uchiita nenzira yaunoita nayo. Zvichida ipapo ivo vangazonzwisisa uye vagokugamuchira iwe pane zvauri.
Iwe uri munhu ane hanya zvakanyanya here? Chii chaunobatanidza nezviri pamusoro, uye chii chausina hukama nacho? Siya mhinduro pazasi kuti ugovane zvaunofunga uye zvakaitika.
maitiro ekubvunza mukomana kunze kwemavara
maitiro ekufunga nezve zvinonakidza chokwadi nezvako
ndichazombosangana nemumwe munhu here
ndingaudza sei kuti anondida
zviratidzo zvinoratidza kuti musikana anokuda
kana mumwe munhu akakutarisa ndokunyemwerera